I-Vivo Z5x, iselfowuni esihluziweyo kunye nescreen esenziwe ngombala kunye nebhetri enkulu | I-Androidsis
Kungekudala iVivo Z5x izakufika, iselfowuni enescreen se-perforated kunye nebhetri enkulu
Ifoto entsha evuzayo, ekubonakala ukuba yathathwa kumzi-mveliso weVivo, ikutyhila oko Inkampani isebenza kwifowuni yoyilo lwenqindi.
I-leaker eyabelana ngomfanekiso ibango lokuba Le fowuni inokufika kwimarike njengeVivo Z5x. Ukwanazo neenkcukacha ezithile zesiphelo, ezinjengebhetri enkulu.
Ngokwangaphakathi, iVivo Z5x izakupakishwa ngebhetri enkulu ye-5,000 mAh. Umngxunya wokufaka umgodi ungabonwa kwikona ephezulu ngasekhohlo kwesikrini.
Ndihlala Z5x ngescreen esigqibeleleyo kunye nebhetri yayo
Ngelishwa, i-leaker ayabelananga ngalo naluphi na olunye ulwazi malunga neenkcukacha zomnxeba, kodwa yonke into yalatha kuyo Ibhetri yeVivo Z5x inokuxhotyiswa ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza. Ndiyathemba ukuba i-smartphone izakubonisa izibuko le-USB-C.
Ulwazi olungqinisisiweyo lwabiwe ngomnye tipster icebisa ukuba isixhobo sinokuba namandla yi Snapdragon 712 o Snapdragon 730. Ileyibheli encanyathiselwe kwimiboniso yefowuni ityhila ukuba inenombolo yemodeli 'V1911'. Kwakhona, umhla wokuveliswa kuka-Epreli 25 okhankanywe kwibhetri yeVivo Z5x ucebisa ukuba ukumiliselwa kwayo kusenokungabikho mva kakhulu.
IVivo Z5x iya kuba yifowuni yesibini yeVivo ukufika ngebhetri ye-5,000 mAh, emva kweVivo Y17 eyanikezelwa eIndiya ngoAprili. Umvelisi ukwabonakala ukuba ulungiselela ukwazisa i-Y17 kungekudala e-China njenge Vivo Y3. Iselfowuni ixhotywe ngescreen se-IPS LCD esikwi-6.35-intshi ebonelela ngesisombululo se-HD + se-1,544 x 720 pixels.
IMediaTek Helio P35 iya kuyinika amandla i-Y3 kunye ne-4GB ye-RAM. Iya kuba nokugcinwa kwangaphakathi kwe-128 GB. Igobolondo elingasemva lefowuni liya kuba ne-13-megapixel + 8-megapixel + 2-megapixel setup kathathu yekhamera. Ukuthatha i-selfie, iya kuba nekhamera yangaphambili ye-8-megapixel. Ifowuni iza nebhetri ye-5,000 mAh enokuhlawuliswa ngezibuko le-microUSB.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Kungekudala iVivo Z5x izakufika, iselfowuni enescreen se-perforated kunye nebhetri enkulu
I-Android 9 Pie ngoku iyafumaneka kwihlabathi liphela kwiGalaxy Tab S4
Phawula indlela yeerobhothi kwimithombo yobutyebi ukubahambisa apho kufanelekileyo kwi-Express Thru